Prakash Khabar:: चिनियाँ दूतावासभित्र ‘सिआइए’ Prakash Khabar
November 29, 2019 | 3110 Views
चीनले नेपालको चिनियाँ राजदूतावासका एकजना पोल्टिकल अफिसरलाई कारवाही गरेको छ । दूतावासमा राजदूतहरु परिवर्तन भइरहन्छन तर, पोल्टिकल अफिसर लामो समयसम्म स्थायी रुपमा रहने गर्दछन् । परिवर्तन भएर आउने राजदूतलाई सम्बन्धीत देशको विषयमा पोल्टिकल अफिसरले नै दिशानिर्देश गर्दछन् । गलत सूचना र पश्चिमाहरुका जासुसहरुलाई चिनियाँ दूतावासले लामो समय देखि नै सहयोग गर्दै आइरहेको छ । नेपाल चीन अध्ययन केन्द्र, नेपाल चीन पारस्पारिक समाज, नेपाल चीन मैत्री समाजका नाममा क्रियाशील दर्जनौ संस्थाहरुमा ‘सिआइए’ मिसनसँग जोडिएका राजा वीरेन्द्रको हत्या गरेको नेपाली सैन्य हेडक्वाटरका जासुसहरु क्रियाशील थिए र छन् । जसलाई नेपालको चिनियाँ दूतावासले सहयोग गर्दै आइरहेको थियो र छ ।
वीरेन्द्रको हत्या गर्ने सैन्य हेडक्वाटरसँग जोडिएदै ‘सिआइए’को काम गर्ने सिआइडीलाई राष्ट्रवादी र चिनियाँ शुभेच्छुकहरुको रुपमा देखाउदै चिनियाँ दूतावासको पोल्टिकल अफिसरको रुपमा आएका ‘सिआइए’का एजेन्टहरु क्रियाशील थिए ।
नेपालगञ्ज तिरका एकजना चीन निकट भन्ने दलालले चीन भ्रमण गराइदिन्छु भन्दै पैसा उठाउँदै पठाउने र सामाजिक संजालमा प्रचार गर्ने गर्दछन् । जो ठगि मुद्दामा हनुमान ढोका प्रहरी कार्यालयसम्म पुगेका थिए । पूर्व एमाले र माओवादीको आवरणमा क्रियाशील धेरै ईण्डो पश्चिमी मिसनका जासुसहरुको चिनियाँ दूतावासमा पहुँच थियो । जसले ‘सिआइए’लाई सूचना बेच्ने गर्दथे ।
यी सबै काम चिनियाँ दूतावासका पोल्टिकल अफिसरको आडमा भइरहेको थियो । अहिले पनि चीनमा बसेर काम गर्ने कतिपय पात्रहरु हुन या चिनियाँ दूतावासमा बसेर भित्र र बाहिर क्रियाशील पात्रहरु ‘सिआइए’कै लागि काम गर्दछन् । उनीहरुको पहिलो प्राथमिकता चिनियाँ शुभचिन्तकहरुलाई टाढा राख्नु र ईण्डो÷पश्चिमी एजेन्ट र देशी विदेशी जासुसहरुलाई प्राथमिकतामा राख्ने र अमेरिकी डलर लिनु हो ।
सन् १९९० को सोभियत संघको विघटन भन्दा पूर्व अमेरिकाले सोभियत संघका धेरै राजदूतावासहरुमा ‘सिआइए’का एजेन्टहरु घुसपैठ गराएको थियो । नेपालको चिनियाँ दूतावासमा ठीक त्यही मोडल अमेरिकीहरुको थियो । २०५८ जेठ १९ दरवारहत्या काण्ड पछि जसरी ‘रअ’ ले ‘कोतपर्वलाई मान्यता दिनु हुँदैन’ भन्दै लेखाएको थियो युवराज घिमिरे सम्पादक हुँदै । यो लेख जेठ २४, २०५८ मा कान्तिपुरमा प्रकाशित भएको थियो । त्यही आशयकै लेख चीन अध्ययन केन्द्रका अध्यक्ष मदन रेग्मीले द काठमाण्डू पोष्टमा लेखेका थिए । यी दुबैको उद्देश्य ईण्डो प्यासिफक रणनीतिको रक्षार्थ राजा वीरेन्द्रको हत्या गरेको नेपाली सेना तिर सोझिने जनताको ध्यानलाई अन्यत्र मोड्दै मूल षड्यन्त्रको ढाकछोप गर्नु थियो । अहिले पनि यस प्रकारको चीनको नाममा रहेका संस्थाहरु ‘सिआइए’का अखडाहरु हुन ।
जे होस् ढिलै भएपनि सत्य तथ्य पत्ता लगाएर चीनले नेपालको चिनियाँ दूतावासका राजनीतिक अफिसरलाई कारवाही गरेको छ । यो सकारात्मक कुरा हो । त्यतिले मात्र पुग्ने छैन चीनको नाममा संस्था खोलेर ‘सिआइए’को काम गर्ने नेपालीहरुलाई दूतावासले ढोका बन्द गरेन र नयाँ संरचना निमार्ण गरेन भने पोल्टिकल अफिसरको कारवाहीले मात्र परिणाम आउने छैन ।
सन् १९९० भन्दा अगाडि सोभियत संघको दूतावाससँग नजिक रहेर बिष्णुबहादुर मानन्धरहरुले ‘सिआइए’को काम गर्दथे । यतिबेला हिजो सोभियत संघको दूरीसँग नजिक रहेको भन्नेहरु डा. केशरजंग रायमाझीधार बाहेक अहिले पनि ‘रअ’ सँग समन्वयन गर्दै ‘सिआइए’को काम गर्ने गर्दछन । जुन समूह सत्तारुढ नेकपामा पनि छन् । यस्तै काम गरिरहेको थियो नेपालको चिनियाँ दूतावासले पूर्व माओवादी भित्रका अमेरिकन र चर्चका एजेन्टहरुलाई क्रान्तिकारी भन्दै घुपपैठ गराउने काम चिनियाँ दूतावासमार्फत नै भएको थियो । चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमणपछि गरिएको यो कारवाही अर्थपूर्ण छ । चीनका विरुद्ध लाग्ने पश्चिमाहरुलाई सफाया गर्ने सन्देश दिएका चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिङ पिङको काठमाडौंमा गरेको सम्बोधनसँगै आफ्नै राजदूतावास भित्र पोल्टिकल अफिसरको जिम्मेवारी सम्हालेका ‘सिआइए’को काम गर्ने खतरनाक जासुसहरुलाई ढोका बन्द गरे जस्तै नेपाली आवरणका एजेन्टहरुलाई पनि रोक्नु त्यतिकै आवश्यक छ ।
पछिल्लो चरणमा खासगरी २०६२÷०६३ पछि पत्रकार बुद्धिजीवी, राजनीतिक कार्यकर्ता जतिपनि चीनमा गएका छन् । ती ‘रअ’का एजेन्टहरु या ‘सिआइए’का र पश्चिमी एजेन्ट एनजिओ आइएनजिओका एजेन्टहरु देखिन्छ । इतिहासमा जसरी कम्युनिष्ट आवरणमा पुष्पलालले ‘रअ’ को काम गरेका थिए । माओवादीको आवरणमा ‘रअ’सँग समन्वयन गर्दै ‘सिआइए’ मिसन चलाइयो । प्रचण्डको पछिल्लो चरणमा यो घेराक्रस गरेतापनि वर्षमान पुन, जर्नादन शर्माहरु ‘सिआइए’ मिसनमै सकृय छन् भने राम कार्की, मातृका यादव ‘रअ’को मिसनमा ।
मोहन बैध देखि डा. बाबुराम भट्टराई, नेत्रविक्रम चन्दहरु ईण्डो÷‘सिआइए’ मिसनमै क्रियाशील छन् । यी समूहसँग आवद्ध ‘सिआइए’का एजेन्टहरु चिनियाँ दूतावासभित्र घुसपैठ ‘सिआइए’ प्रभावकै कारण चीनको आवरणमा भ्रम दिदै आइरहेका थिए । पुष्पलाल प्रतिष्ठान, पुष्पलाल अध्ययन समाज, कृष्णसेन स्मृति प्रतिष्ठानले अहिले पनि बामपन्थी आवरणमा भारतीय जासुसी निकाय ‘रअ’को काम गर्दछन् । यसको विस्तृत ब्याख्या भर्खरै प्रकाशित ‘नारायणहिटी हत्याकाण्ड सेना र माओवादी’ पुस्तकमा छ ।
राष्ट्रवादको आवरणमा भारतको तिब्रआलोचना गर्ने तर काम ‘सिआइए’को गर्ने चिनियाँ दूतावासका र अमेरिकी एजेन्टहरुसँग निकट नेपाली एजेन्टहरु बामपन्थी र राष्ट्रवादी आवरणमा क्रियाशील रहेका छन् । चिनियाँ राजदूतावासले आफ्नो पोल्टिकल अफिसरको कारवाहीसँगै चीनको आवरणका नेपाली इण्डो ‘सिआइए’ एजेन्टहरु पनि किनारा लाग्नेछन् भन्ने अपेक्षा चीनका असल शुभ चिन्तकहरुको रहेको छ ।
कर्णाली तिरका पत्रकारको भेषमा रहेका ईण्डो ‘सिआइए’को काम गर्ने ‘सिआइए’हरु मध्येका पुराना ब्यक्ति योगीनरहरी नाथले पशुपतिनाथको भट्ट (भारतीय) हटाउने अभियान चलाउने योगीकै विरुद्ध जासुसी गरेपछि पशुपति सेना नेपालको नामबाट योगी नरहरीनाथद्वारा वितरण गरिएको पर्चामा ती ब्यक्ति गुप्तचर रहेको सार्वजनिक गरिएको छ । चिनियाँ आवरणमा नेपालगञ्जतिर घर बताउने एकजना नेपाली सेना र दरवारको ‘सिआइए’ केन्द्रका गुप्तचरले योगी नरहरीनाथले नाम सार्वजनिक गरेका तिनै ‘सिआइए’सँग समन्वय गरेर काम गर्दथे । जसको सम्बन्ध भर्खरै कारवाहीमा परेका चिनियाँ दूतावासका तिनै पोल्टिकल अफिसरसँग थियो ।
यस प्रकारका इण्डो÷पश्चिमी एजेन्टहरुको काम गर्ने राजा वीरेन्द्रको हत्या गरेको नेपालको सैन्य हेडक्वाटरसँग समन्वयन गर्दै युटुव र सडकमा चर्को राष्ट्रवादको आवरणमा यस्ता छद्मभेषी सिआइडीहरु अहिले पुन जुर्मुराउन खोज्दैछन् ।
राजावादी आवारणका काम ‘सिआइए’को गर्ने तर राष्ट्रवादको आवरणमा देखिनेहरुलाई चिनियाँ दूतावासका पोल्टिकल अफिसरहरुले संरक्षण गर्दै आइरहेका थिए । ढिलै भएपनि राष्ट्रपति सी जिङ फिङको भ्रमण पछि चिनियाँ दूतावासबाटै सफाया गर्ने शुरु गरिएको घुसपैठ ‘सिआइए’ मिसनलाई अन्यत्र पनि सफाया गरिने अपेक्षा छ ।
चीन अध्ययन केन्द्रमा रहेका डा. उपेन्द्रबहादुर गौतम हुन या प्रा. मोहन लोहनी प्लस २५ को नाममा कार्टर सेन्टरको काम गर्ने ‘सिआइए’ जासुसहरुको समूहमा जोडिएर भूमिका निभाउन पनि संरक्षण पाउनुमा चिनियाँ दूतावास भित्रकै घुसपैठ ‘सिआइए’ एजेन्टहरुको कारण थियो ।
प्लस २५ को नाममा क्रियाशील ‘सिआइए’ मिसनको कनेक्सनमा राजा वीरेन्द्रको हत्या गरेको सैन्य हेडक्वाटर र पूर्व राजाका मुख्य सचिव पशुपतिभक्त महर्जन सम्म रहेको छ । चिनियाँ दूतावासमा रहेका पोल्टिकल अफिसरकै आडमा यसरी अमेरिकनहरु सम्म गोप्यता पुग्न सामान्य भइसकेको थियो । जे होस् चिनियाँ दूतावासमा रहेका पोल्टिकल अफिसर मात्र होइन अन्य घुसपैठ ‘सिआइए’एजेन्टहरु सहित चीनको आवरणमा खेल्ने ईण्डो÷पश्चिमाको काम गर्ने नेपाली गुप्तचरहरु पनि सफाया हुने अपेक्षा गरौं ।
(यी लेखकका निजी विचार हुन ।
ब्यक्तिगत सुरक्षाका कारणले पात्रको नाम उल्लेख गरिएको छैन । )